Xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheekh oo war ka soo saaray xaaladda Jubbaland iyo Galmudug – Kalfadhi
Xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheekh oo war ka soo saaray xaaladda Jubbaland iyo Galmudug
in War-Saxaafadeedyo, Warar
Xisbiga uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ee Midowga Nabadda iyo Horumarka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda sii xumaaneysa ee maamul gobaleedyada iyo dowladda federaalka Soomaalia.
Xisbiga ayaa soo bandhigay mowqifkiisa ku aadan xaaladda siyaasadeed iyo wadashaqayn la’aanta madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul gobaleedyada aygoo soo saray baaqyo arintaan lagu xalinayo.
War saxaafadeed uu soo saaray Xisbiga UPD ayaa lagu sheegay in Xisbiga uusan ku qanacsaneen doorka dowladda federaalka Soomaaliya ee xalinta xiisadda taagan. Sidoo kale waxa uu sheegay in aad uga walaacsan yahay Xisbiga UPD in si guud shaqada Qaranka ay istaagtay.
Sidoo kale Xisbiga ayaa xusay in dowladda federaalka ay sanad-kii la soo dhaafay ku heysay Maamulkaas kala qeybin, isku dir, Cunaqabateyn iyo beegsi joogto ah oo ku aadan magac dilka Madaxda maamulkaas iyo is hor-istaagga mashaariicdii horumarineed ee dawlad goboleedka Galmudug loogu talagalay.
Xisbiga ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay joojisay faragelinta ay ku heyso Maamulada Galmudug iyo Jubbaland. Sidoo kalane ay joojiso dhamaan cadaadiska ay saartay maamul gobaleedyada dalka si marxaladda kala guurka looga baxo wadajir iyo wax wada qabsi.
“Xisbiga waxa uu soo dhowaynayaa heshiiskii Galmudug iyo Ahlusunna ee Jabuuti oo ay garwadeyn ka ahaayeen Urur gobaleedka IGAD kaas oo horseeday maamul mid ah in uu ka shaqeeyo Galmudug” ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay Xisbiga UPD.
“Xisbiga waxa uu ku talinayaa in heshiiska la siiyo waqti iyo fursad, la iskana kaashado sidii hey’adaha dastuuriga ah ee Galmudug ay go’aan wadajir ah uga gaari lahaayeen marxalaad adage e Galmudug” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka ee UPD.
Xildhibaan Xuseen Iidow oo sheegay in laba aragti ay isku heyso Soomaaliya
Wasaaradda Arimaha Gudaha oo soo saartay habraaca doorashooyinka maamul gobaleedyada